Nezvedu - Wenzhou Cavoli Utsanana Ware Co., Ltd.
Tine Makore Anopfuura Makumi gumi neshanu eIye yekugezera Yekugadzira Chiitiko
WENZHOU CAVOLI UTSVENE WARE CO., LTD ndeimwe yekutungamira yekugezera accessories mugadziri uye kunze kwenyika muWenzhou guta kweanopfuura makore gumi nemashanu. Isu tinovaka se fekitori muna 2005, tinongotarisa pakuburitsa.Gare gare, kambani yeC CAVOLI yakanyoreswa mugore ra2010.Nekuenderera mberi kwekuvandudza, nzvimbo yefekitori ingangoita 7000 m2, pamusoro pe80 inoshanda mufekitori.
Yedu huru renji zvinhu ndeZinc Alloy, Brass & 304SS ine akasiyana mavara Anopedzisa (Chrome, Nickel Brushed, Nhema, Orb uye zvichingodaro) .Zviuru zvemhando dzakasiyana uye dhizaini yekugezera zvinopinda izvo zvinosangana zvese pamusoro penyika mutengi zvido.
Seunyanzvi hwekugadzira, tinogona kuburitsa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, timu yeOEM & ODM.CAVOLI inosimbisa pane inoshanda manejimendi uye yemhando yepamusoro kutonga mukugadzira kwezuva nezuva. "Tevera Kwakanaka Hunhu, Mutengi Kutanga" ndicho chinangwa chedu. Zvakare, isu tine simba rakasimba mukugadzira uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvinoenderana nemusika kuravira uye zvinodiwa nevatengi.
CAVOLI vakapfuura fekitori odhita uye vane ISO9001, CE uye ROHS, pamwe neAmerica supamaketi .Mainly Export 90% yezvigadzirwa zvedu uye chete 10% mudzimba.Zvigadzirwa zvedu zvinotengesa kunze kwezwi rese uye musika mukuru North America, South America Europe uye Mid East Mutengi wedu mukuru iSupermarket, wholesales uye muridzi wechiratidzo.
Kambani yedu inowedzera kushandiswa kwenyika uye indasitiri zviyero, kunyatso kudzora maitiro ega ega, kuvimbisa mhando yechinhu chimwe nechimwe. Mushure mekunge zvishandiso zvatsvedza kumutengi wedu, tichaita yakazara seti yekuongorora nezve mashandiro emidziyo yedu, tobva tavandudza hunyanzvi hwedu nehunhu. Iyo kambani ndiyo hombe uye ine yakakwana michina maitiro mudunhu reZhejiang.
Kambani yedu ine seti yemachina chaiwo ekushandisa michina .. Uye zvakare nepamusoro timu yehunyanzvi, vanopfuura makumi masere vashandi. Vachaedza nepese pavanogona napo kugadzirisa zvigadzirwa zvakanaka kumutengi wedu. 24h mushure mekutengesa masevhisi.Vashandi vedu vachakubata iwe kuti vagadzirise matambudziko ako panguva yekutanga.
Tiri kutarisira kugamuchira kubvunzurudza kubva kwauri uye ndokuva mupi mukuru muChina ine mhando yakanaka pamakwikwi emitengo!